Sajhasabal.com | Homeकुश्मा नगरपालिकाको बलिलो मेयरकोको उम्मेदबार म बाहेक अरु हुनै सक्दैन ःकृष्णप्रसाद उपाध्याय
वि.स २००७ साल वरीपरीबाट भएका राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न बनेको नेपालका संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न तीन तहको निर्वाचन जरुरी छ । त्यसै कारण स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा मात्र भएको छैन, नेपालका राजनीतिकदलहरु बिच चुनावी दाउपेच पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना उमेदवार छान्ने प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन् । मुलुककै सबै भन्दा जेठो र ठूलो राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेसमा स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुमा उमेदवारका आकांक्षीहरुको बाढी नै आइरहेको छ ।
पर्वत जिल्लाको राजनीतिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने कुश्मा नगरपालिका मेयर र उपमेयर पदमा नेपाली काँग्रेसका वडा एकाई समितिहरुले आ–आफ्नो वडाबाट कुश्मा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरका उमेदवारका लागि क्षेत्रीय समितिलाई नाम सिफारिस गर्नेक्रम जारी छ । एक विश्वस्त स्रोतका अनुसार उपमेयर पदका लागि सरस्वती शर्मा जिज्ञासु र सिता काफ्ले लामिछानेको मात्र नाम सिफारिस भई आएका छन् तर मेयर पदका लागि रामचन्द्र जोशी, डा.चुडामणी शर्मा, वसन्त बहादुर सिके, कृष्णप्रसाद उपाध्याय, दयाराम शर्मा, मनोज गुरुङ, गंगाधर पौडेल, हरिबहादुर सुवेदीका नाम क्षेत्रीय समितिमा सिफारिस भईसकेका छन् । ति मध्ये टिकटका लागि आन्तरिक दौड धुपमा रहेका कुश्मा न.पा. वडा नं. ८ निवासी कृष्ण प्रसाद उपाध्याय सँग त्यसै विषयको सेरोफेरोमा हामीले गरेका कुराकानीको सार संक्षेप यस्तो छ ः
तपाईंले कुश्मा नपाको मेयर पदको उमेदवारका टिकट दावी गरिरहँदा नेपाली काँग्रेस पार्टीमा तपाईँको योगदान के छ ?
नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भएमा शान्तिपुर्ण जन आन्दोलनहरुमध्ये महत्वपुर्ण मानिने २०४६ साल र २०६२÷६३ का जनआन्दोलनहरुमा म ज्यानको बाजी थापेर होमिएको छु, पदीय रुपमा म २०४६ सालमा नेविसंघ चुवा गाउँ एकाइ समितिको अध्यक्ष भएँ । १० औँ महाधिवेशन देखि १२ औं महाधिवेशन सम्म म क्षेत्रीय प्रतिनिधिको हैसियतमा जिल्ला अधिवेशनमा भाग लिंदै आएको छु । एघारौं महाधिवेशन म पर्वत जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य थिएँ । तद् उप्रान्त म जिल्ला कार्यसमितिको आमन्त्रित सदस्य भएको छु । जीविकोपार्जनका सिलसिलामा म पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा प्राध्यापन पेशामा रहेकाले यस जिल्लाबाट पार्टी संगठनका अझ महत्वपुर्ण पद प्राप्त नगरेपनि पार्टी संगठन सुदृढीकरणमा मैले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छु । म जहाँ भए पनि पार्टिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न चुकेको छैन ।
तपाई त जागिरे जीवनमा पोखरामा बस्नु हुँदोरहेछ, यहाँ त पेशेवर राजनीति गर्नेहरु छन्, तपाईलाई पार्टी संगठनमा गरेको योगदानका आधारमा टिकटको कमजोर दावेदार हुनुभएन र ?
नेपाली काँग्रेस पर्वतमा माननीय सांसद अर्जुन जोशी बाहेक पूर्णकालिन राजनीतिक जीवन भएका साथीहरुको संख्या झण्डै शुन्य छ । नेपाली काँग्रेसमा आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर, राजनीतिक रुपमा स्वयंसेवक वन भन्ने अघोषित नीति छ । त्यसैले जिवीकोपार्जन तथा आयआर्जनका लागि कतिले व्यवसाय तथा ठेक्का पट्टा गर्नु हुन्छ त केहीले विविध क्षेत्रमा जागिर गर्नुभएको छ । जो जहाँ रहे पनि पार्टी संगठनका लागि आ–आफ्नो तर्फबाट योगदान गरिरहनु भएको छ । योगदानको रुपमात्र फरक छ, सार एउटै छ । प्रारम्भमा श्रद्धेय नेता अर्जुन प्रसाद जोशी र आदरणीय दाजु नवराज गुरुङ पनि पर्वत बाहिर रहेर प्राध्यापन नै गर्नुहुन्थ्यो । मैले पनि मात्रात्मक रुपमा पार्टी संगठनमा प्रशस्त योगदान गरेको छ । म कसरी कमजोरी दावेदार भएँ र ?
नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर छ, त्यसैले साम, दाम दण्डभेद गर्नेले मात्र चुनाव जित्ने गरेको देखिन्छ । तपाईले टिकट पाएमा चुनाव हाँक्न सक्नुहुन्छ ?
नेपाली काँग्रेसबाट बनेका उमेदवारहरुलाई विजयी गराउन पार्टी संगठन संयन्त्रका सम्पुर्ण अंगहरु क्रियाशिल हुन्छन् । संगठनले चुनाव हाँक्ने प्रचलन छ । तर पनि मैले व्यक्तिगत रुपमा नेपाली काँग्रेस र मेरो पक्षमा जनमत निर्माण, संरक्षण र प्रयोग गर्न आवश्यक साधन एवम् स्रोतको कमी हुन दिने छैन । चुनाव जित्नका लागि मेरो व्यक्तगत सामाथ्र्य कत्ति पनी कमजोर छैन । शैक्षिक योग्यताका हिसावले पनि व्यवस्थापन विषयमा मास्टर डिग्री गरेको छु ।
नेपाली काँग्रेसमा आफूले टिकट नपाएमा टिकट पाउने व्यक्तिलाई असहयोग मात्र होइन अन्तर्घात गर्ने संभावनमा बढी हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । यसमा तपाईको के धारणा छ ?
नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले पार्टीले सिधै माथिबाट उमेदवार तोक्ने कार्य हुदैन । केन्द्रले उमेदवार सिफारिस एवम् छनोटको कार्यविधि र प्रक्रिया निर्धारण गरी संगठनको तल्लो एकाईलाई लिखित परिपत्र पठाउँछ । त्यसैका आधारमा आंकाक्षीहरुको नाम संकलन, सिफारिस र छनोट हुन्छ । दावेदारहरुमध्ये सबैभन्दा बलियो उमेदवार म नै भएकाले पार्टिले मलाई टिकट दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु । मैले अन्तिम समय सम्म टिकटको दावी गरिरहन्छु, कथमकदाचित् पार्टीले मलाई टिकट दिएनछ भने टिकट पाउने साथीलाई जिताउन मैले नै टिकट पाए झैं होमिन्छु । अन्य आकांक्षिहरु प्रति पनि मेरो यहि विश्वास छ ।
तपाईले मेयर पदमा टिकट पाउनु भयो र चुनाव जित्नु भयो भने कुश्मा नगरपालिकाको राजनीति, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि के एजेण्डा छ ?
म व्यक्तिगत एजेण्डा लिएर भन्दा पनि पार्टीको घोषणा पत्रमा उल्लेखित एजेण्डा लिएर चुनाव लड्ने हो । यद्यपी राज्य पुनसंरचनाको संक्रमणकालिन अवस्थामा स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदै छ । अवसर र चुनौतीहरु धेरै छन् । तीनको सामना गर्ने मेरो निजी दृष्टीकोण र सामथ्र्यलाई पनि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक गतिविधिमा अन्य राजनीतिक दलसँग मैत्रीपुर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने, विकास र निर्माणमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहकार्य गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने छु । संविधान, संघिय कानुन र प्रादेशिक कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय ऐन नियम बनाउने छु । सामाजिक सेवा र भौतिक पूर्वाधारहरु जनताको घरदैलोमा पु¥याउन नगरपालिकाका सम्पुर्ण अंगहरुलाई एकिकृत र प्रभावकारी ढंगबाट परिचालन गर्ने छु । न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने छु । कुश्मा नगरपालिका प्रकृति र संस्कृतिका आधारमा पनि धनि छ । त्यसैले व्यवसायका क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय प्रवद्धनलाई विशेष जोड दिने छु । कृषि पेशालाई व्यावसायिकरण गर्न जोड दिने छु । योजनाबद्ध रुपमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने छु । युवा जनशक्तिका लागि स्वरोजगारका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने छु । जमिन, जंगल, जनशक्ति, जडिबुटी, जलस्रोत अधिकतम् उपयोग गरे मुलुकभरका नगरपालिकाहरुमध्ये कुश्मा नगरपालिकालाई सभ्य र सम्बृद्धिका आधारमा अग्रस्थानमा उभ्याउने छु ।